फोहोर फाल्ने ठाउँ होइन, पर्यावरणीय पार्कको रुपमा विकास गर्दैछौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिना – WASHKhabar
फोहोर फाल्ने ठाउँ होइन, पर्यावरणीय पार्कको रुपमा विकास गर्दैछौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिना
Wednesday, January 29, 2020 667 पटक हेरिएको
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले २०७८ साल पुसभित्रै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी अभियानलाई तीब्र पारिएको छ । पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना २०७५ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) डेस्क स्थापना गरी पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । नगरपालिकाले सन् २०२१ अर्थात २०७८ साल पुस मसान्त भित्रै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख घोषणा गर्ने लक्ष्य गत साल नै निर्धारण गरेको हो ।
यसै सन्दर्भमा पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना २०७५ ले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपालिकाले गरिरहेको काम, बहुसरोकारवाला पक्षको सहभागिता जुटाउन गरिरहेको प्रयास, सरसफाइ सन्देश घरका हरेक सदस्य माझ पुर्‍याउन अपनाईरहेको रणनीति आदिका बिषयमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिम्सिना सँग पी.टी. लोप्चनले गर्नुभएको कुराकानी :
चाँगुनारायण नगरपालिकाले पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना जारी गरेको पनि एक बर्ष पार भईसकेको छ । रणनीतिक योजनाले राखेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपाकिाले के गरिरहेको छ ?
हो, पाँचौ नगरसभाले समेत यस सम्बन्धमा स्पष्ट दिशा निर्देश गरिसकेको छ । २०७८ पुस मसान्तभित्र पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यसका विभिन्न अवयवहरु छन् । ती सम्पूर्ण पक्षलाई सरसफाइ क्षेत्रका विभिन्न आयामहरुभित्र बसेर क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरु तय गरेको छ ।
रणनीतिक योजनाले विद्यालय सरसफाइको कुरालाई लिएको छ । खानेपानी सरसफाइको कुरा, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको कुरा गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइको कुरा गरेको छ र समग्रमा चाँगुनारायण नगरपालिका भित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गराउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
यसका लागि नगरपालिकाले केही उल्लेख्य कामहरु गरेको छ । कम्तीमा सरसफाइको चेतना घरघरसम्म पुर्‍याउनु पर्छ, समुदायलाई नमुना सरसफाइयुक्त बस्तीको रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ । सार्वजनिक निकायहरुमा सरसफाइ उदाहरणीय ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुहिने नकुहिने फोहोरहरुलाई बर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । त्यो सिकाई आम समुदायले त्यहाँबाट पनि अवलम्बन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कार्यान्वयन गरेका छौं ।
हामी फोहोर फाल्ने ठाउँ होइन कि पर्यावरणीय पार्कको रुपमा व्यवस्थित गर्नेछौं । त्यसपछि चाँगुनारायण नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नमुना योग्य नगरपालिका बन्नेछ ।
यस्तै मुख्य सार्वजनिक स्थलहरुमा डस्टबिनहरुको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले चाहिं विद्यालय स्तरबाट सरसफाइ अभियान चलाउँदा घरघरमा पुग्ने भएकाले विद्यालय स्तरबाटै त्यसको सुरुवात गरिएको छ । वडा – वडामा मानिसहरु खटाएका छौं । वडा वडामा तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुले काम गरिरहनुभएको छ । वडा – वडामा कहाँको अवस्था के छ ? भनेर तथ्याङ्क लिइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार कस्ता कार्यक्रमहरु कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले विश्लेषणात्मक ढंगबाट योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ । यसका लागि हामीले युएन् ह्याट्यिाटसँग साझेदारी गरिरहेका छौं । अझ यो साझेदारीबाट हामीलाई २०७८ पुस भित्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सजिलो हुने भएको छ ।
२०७८ पुसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि त अहिले देखि नै बस्ती या वडा स्तरलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा गर्दै लैजानुपर्‍यो, यसमा चाहिं कसरी काम भईरहेको छ ?
हामीले सुरुमा वडा तहसम्मै संस्थागत व्यवस्था गरेका छौं । हामीसँग एउटा रणनीतिक योजना भयो , त्यसपछि सरसफाइ सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं । नगरपालिकामा नगर प्रमुख ज्यूको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय वास कमिटी बनेको छ । त्यसपछि सरसफाइ सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं । त्यस्तै वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा वडा – वडामा वडा स्तरीय सरसफाइ, स्वच्छता समन्वय समिति छ । यसलाई समुदायसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर वडा भित्रका सबै निकायहरुलाई ल्याएर छलफल चलाईरहेका छौं । जस्तो सहकारी संस्था, त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, सामाजिक संस्थाहरु, विद्यालय क्षेत्र यी सबै समेटेर कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् ।
हामीसँग ८०/९० जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु हुनुहुन्छ । हाम्रा आवधिक बैठकहरु हुन्छन् । ती सबै बैठकबाट हामीले यसो गरौं भन्ने ढंगले खबर सम्प्रेषण गरेका हुन्छौं र अर्को बैठकमा त्यसको पृष्ठपोषण सहित आएका हुन्छौं र थप नयाँ कुरा लिएर गएका हुन्छौं । त्यस्तै आठ जना कर्मचारीहरु हामीले यही कामका लागि परियोजना मार्फत नियुक्ति गरेर खटाएका छौं । वडा – वडामा फलोअप भईरहेको छ । वासका बैठकहरु भईरहेका छन् । यसले गर्दा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुनेछौं ।
रणनीतिक योजनाले त अझै कतिपय घरमा कच्ची चर्पी रहेको र सार्वजनिक शौचालयको समेत अभाव औल्याएको थियो, नगरपालिकाले यसको परिपूर्तिका लागि के गरिरहेको छ ?
सार्वजनिक शौचालय भन्ने वित्तिकै त्यहाँ दुर्गन्ध छ, पानीको व्यवस्थापन छैन । त्यसको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने आम मानिसको बुझाई छ । तर चाँगुनारायण नगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालयबाट दिईने सेवालाई व्यापारसँग जोडेका छौं । त्यहाँ कफी सप होला या कुनै पसल होला, हामीले पसल सञ्चालनको माध्यमबाट शौचालयलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौं । त्यहाँ र्‍याम्प बनेको छ, त्यहाँ पुरुष – महिलाका लागि फरक फरक, अपाङ्गतामैत्री शौचालय बनेका छन् । अब सार्वजनिक शौचालयको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गरी काम अघि बढिरहेको छ । शौचालय नजिकैको प्रबन्ध समिति, व्यवस्थापन समिति वा निजी क्षेत्र सबैसँग खुला आव्हान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट शौचालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउँछौं ।
यसले गर्दा नगरपालिकालाई समेत केही रकम राजश्व तिर्ने गरी शौचालय सञ्चालन गरिनेछ । हामीले १ करोडसम्मका शौचालय बनाउने गरिएको छ । यहाँ फरक ढंगकै शौचालयको निर्माण र प्रयोग पनि फरक ढंगले भईरहेको छ । यो सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन र पूर्ण सरसफाइ उन्मुख बन्नका लागि पनि अति आवश्यक चीज हो भन्ने ठानेर नगरपालिकाले यसरी काम अगाडि बढाईरहेको छ । यही शीलशीलामा केही समयअघि १०/११ देशका प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहले गरिरहेको काम, सार्वजनिक शौचालयमा ल्याएको अवधारणा आदि हेर्न आउनुभएको थियो । हामीले केही समुदाय, बस्तीलाई नमुना बस्ती घोषणा गर्दै अगाडि लगिरहेको सन्दर्भ पनि छ, त्यसलाई समेत हेर्ने, त्यसको सिकाइबाट अन्यत्र पनि अवलम्बन गर्न सकिने चीजहरु के के छन् भनेर पनि हेर्नु भएको थियो ।
अब कुरा गरौं, पूर्ण सरसफाइको अर्को महत्वपूर्ण पाटो फोहोरमैला व्यवस्थापनको । यसको व्यवस्थापन चाहिं कसरी भईरहेको छ ?
हामीले हरेक हप्ता सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं, हरेक हप्ताको शनिबार नगरपालिकाको सरसफाइ हप्ता हुन्छ । अहिले उनान्तीसौ हप्ता चलिरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको फोहोरलाई हटाएर व्यवस्थापन गर्न थालेका छौं । हामीले सरसफाइको क्षेत्रमा साझेदारी गरेका छौं । यसमा नगरपालिकालाई पैसा तिर्नु नपर्ने, सदस्यताको अवधारणाबाट खुला आव्हान गरेर संस्थाहरु छानेका छौं, ती संस्थाहरुले फोहोर व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहनु भएको छ । खोलामा सार्वजनिक ठाउँमा, खुला चौरमा देखिएका फोहोरहरु सबै हटाईएको छ ।
अहिले त्यस्तो ठाउँमा फोहोर गर्न दिईएको छैन र घरघरबाट निस्कने फोहोरलाई पनि सदस्यताको माध्यमबाट हप्ताको दुई पटक संकलन गर्ने गरेका छौं । अहिलेसम्म सिसडोल पुर्‍याउँदै आएको हाम्रो नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न आफ्नै ल्याण्डफिल साईट पनि निर्माण गर्दैछौं । यसका लागि डिपीआर बनाउने काम सुरु भएको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधीहरुले धनकुटाको ल्याण्डफिल साईट हेरेर आईसक्नुभएको छ । अझ हामी त्यो भन्दा पनि परिस्कृत बनाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ होइन कि पर्यावरणीय पार्कको रुपमा व्यवस्थित गर्नेछौं ।
त्यसपछि चाँगुनारायण नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नमुना योग्य नगरपालिका बन्नेछ । हाम्रो नगरपालिका उपत्यकाभित्रको मात्र नभई फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अन्यत्रबाट समेत केही सिक्न र हेर्न योग्य बन्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई स्रोतमै
पाँचखालमा बृहत खानेपानी आयोजनाको
कीटाणुको स्रोत र रोकथामको
ललितपुर महानगरपालिकाले पार्क निर्माण
धुलिखेल स्वस्थ शहर बनाइँदै,
खानेपानी अभावले १२ घरको
काठमाडौंको परम्परागत पुनःभरण प्रणाली संसारकै उत्तम : डा. भट्टराई
महानिर्देशकको दृष्टिकोणमा कोभिड – १९ ले वास क्षेत्रमा पारेको असर
मेलम्ची खानेपानीमा बदमासी गर्नेलाई सजायको सट्टा प्रोत्साहन
दुग्ध विकास संस्थानकै दहीमा भेटियो कोलिफर्म, प्रतिग्राम ६८ हजारसम्म कोलिफर्म
मेलम्चीको नयाँ मिति : काठमाडौ ल्याउन कम्तीमा मंसिर लाग्ने
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई स्रोतमै बर्गीकरण गर्न नेफेजको माग
पाँचखालमा बृहत खानेपानी आयोजनाको काम धमाधम
कीटाणुको स्रोत र रोकथामको उपाय
ललितपुर महानगरपालिकाले पार्क निर्माण गर्ने
धुलिखेल स्वस्थ शहर बनाइँदै, स्वस्थ आहार, फोहोरमैला ब्यवस्थापन लगायतलाई प्राथमिकता दिईने
खानेपानी अभावले १२ घरको उठिबास
बाढीपहिरोले कालिकोटमा २९ खानेपानी आयोजना बगायो
बोर्डले बनाएको पाइपलाइन खानेपानी संस्थानद्वारा तोडफोड
थप दुई लाखले पाए उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी